Abahlinzeki bemikhiqizo neFektri - Abakhiqizi bemikhiqizo yaseChina - Ingxenye 3
Umsebenzi wokuzibhubhisa uzoqalwa ngokuzenzekelayo ngemuva komjovo, uvimbele ngempumelelo ukusetshenziswa kwesibili.
Idizayini yokwakheka okukhethekile inika amandla isixhumi esiyindilinga ukushayela umhlangano wenaliti wokujova ukuhlehlela ngokuphelele emgodleni, ukuvimbela ngempumelelo ubungozi bezinti zezinaliti zabasebenzi bezokwelapha.
Isici esikhulu kunazo zonke se-Syringe esikhubazeka ngokuzenzakalela inaliti yomjovo izodonsela ngokuphelele emgodleni ukuvikela ubungozi bezinti zezinaliti. Umklamo wesakhiwo esikhethekile unika amandla isixhumi esiyindilinga ukushayela umhlangano wenaliti wokujova ukuze uhoxe ngokuphelele emgodleni, uvimbele ngempumelelo ubungozi bezinti zezinaliti zabasebenzi bezokwelapha.
1. Ikhwalithi yomkhiqizo ozinzile, ukulawula okugcwele kokukhiqiza okuzenzakalelayo.
2. Isivalo senjoloba senziwe ngenjoloba yemvelo, kanti induku eyinhloko yenziwe ngezinto zokuphepha ze-PP.
3. Imininingwane ephelele ingahlangabezana nazo zonke izidingo zomjovo womtholampilo.
4. Nikeza ukupakisha kwephepha-kwepulasitiki okuthambile, izinto ezilungele imvelo, kulula ukuzikhipha.
Lo mkhiqizo usetshenziselwa ukusebenza kwenhliziyo ngaphansi kombono oqondile ukuhlunga ama-microembolisms ahlukahlukene, izicubu zomuntu, amahlule egazi, ama-microbubbles nezinye izinhlayiya eziqinile egazini le-extracorporeal. Kungavimbela embolism yesiguli emincane futhi kuvikele ne-microcirculation yegazi lomuntu.
Umkhiqizo usetshenziselwa ukuhlinzwa kwegazi okungaphandle futhi unemisebenzi yokugcina igazi, ukuhlunga kanye nokususa i-bubble; isiqukathi segazi esivaliwe nesihlungi sisetshenziselwa ukubuyisa igazi lesiguli ngesikhathi sokuhlinzwa, okunciphisa ngempumelelo ukumoshwa kwemithombo yegazi ngenkathi kugwenywa ithuba lokutheleleka ngegazi, ukuze isiguli sikwazi ukuthola igazi elinokwethenjelwa futhi elinempilo .
<< <Langaphambilini 12345 Okulandelayo> >> Ikhasi 3/5